Vokatry ny Fifohazana faritra Avaratr’Andohalo – FJKM Ambavahadimitafo Vokatry ny Fifohazana faritra Avaratr’Andohalo |
Hafatra avy amin’ny Synodam-paritany Antananarivo Atsinanana faritra Avaratr’Andohalo sampana Fifohazana mikasika ny Vokatra
Ny birao sy ny komity mpandrindra ny sampana Fifohazana eto amin’ny faritra Avaratr’Andohalo dia mampahafantatra ny sampana fifohazana isam-pitandremana fa hisy ny iray volan’ny faritra Avaratr’Andohalo izay hanantanterahana Vokatra mandritra ny volana Oktobra 2009 ho solon’ny hetsika fitadiavam-bola mba ahazoana manefa ny adidy amin’ny synodam-paritany.
Anjaran’ny isam-pitandremana no mandamina izay fotoana fantany maha-mety hanantanterahana izany. Araka ny fandaminana izay tapaka dia ny faran’ny volana Oktobra 2009 no hanaterana izay vita. Ny toerana hanaterana izany dia ao amin’ny Lycée Fanomezantsoa Ambohimiray.
Ampahatsiahivina ihany koa fa ny fivorian’ny birao sy komity mandrindra dia atao isaky ny sabotsy faha 4 ny volana ao amin’ny Lycée Fanomezantsoa Ambohimiray ihany, ka ny fotoana dia amin’ny 14h tsy diso.